Xildhibaannada ugu mushaar badan Afrika ee haddana saluugsan | Saxil News Network
Xildhibaannada ugu mushaar badan Afrika ee haddana saluugsan
December 5, 2018 - Written by editor
Image captionXildhibaannada Kenya ayaa ah kuwa ugu mushaarka badan Afrika
Waxaa aqalka barlamaanka ee dalka Kenya horyaalo hindise sharciyeed qabyo ah oo ay soo jeediyeen guddiga xildhibaanada ee u qaabilsan arrimaha cadaaladda iyo sharciga.
Hindisan oo aan wali la meel marinin, buuq badan n aka dhaliyay guud ahaa dalka Kenya ayaa haddii la ansixiyo waxaa uu xildhibanaada iyo guddoonka barlamaanka ee Kenya uu u oggolaanayaa inay helaan lacago gunnooyin ah.
Xildhibanaada ayaa heli doona baabuur, guri, shidaalka baabuurka, caymiis dhanka caafimmaadka iyo lacago gunnooyin ah marka ay aadaan safarada dalka dibadiisa, waxaana qarashaadka iminka ay doonayaan uu gaarayaa boqolaal kun oo doolar.
“Kenya oo qarka u saaran qalalaase dastuur”
Qorshahan ayaa wxaa dabada ka riixaya xildhibanaad barlamaanak ee Kenya, waxaana ay doonayaan in ay helaan adeegyadaasi oo dhan, madaama qaarkood ay ku andacoodaan in aysan ”mushaar fiican aysan helin”.
Xildhibanaada ayaa haatan mushaar ahaan u qaata lacag ku dhaw toban kun oo doolar.
Image captionMadaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay mudanayaasha ay dib uga fikaraan, kana fikiraan danta shacabka
Dalabka xildhibanaada oo dad qaar ay u arkaan in aysan munaasab aheyn xiligan ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta oo sheegay in mudanayaasha ay dib uga fikaraan, kana fikiraan danta shacabka.
“Qof walbo wuxuu jecelyahay in uu ku noolaado noolal aad u wanaagsan, balse waxaa wanaagsan in aan ka fikirno sidii aan u horumarin laheyn noolasha iyo danta dadka xilka inoo” ayuu yiri madaxweyne Kenyatta.
Arrinkan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay afhayeenka barlamaanka Kenya, Justin Muturi oo isna sheegay in haddii xitaa la meel mariyo hindisahan uusan qaadan doonin lacagahaasi gunnooyinka.
Muturi ayaa intaa raaciyay in tallaabadan ay tahay mid ka dhan sharciga dalka.
Masuuliyiinta xisbiyadda ee labada aqal ayaa arrintan qayb ka noqon doonta taas oo maamulkeeda ay gacanta ku hayn doonan gudiga qaabilsan aadeegyada barlamaanka oo uu hogaamiyo afhayeenka barlamaanka Justin Muturi.
Xilibhaanada dalka Kenya oo lagu tiriyo in ay kamid yihiin xildhibanaada ugu mushaarka badan caalamaka ayaa haddana waxay ku anadcoonayaan in aan loola macaamilin sida golaha wasiirada dowladda iyo garsooraysaha maxkammadda.
Hasa yeeshee arrinkan ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar badan oo kamid ah shacabka reer Kenya iyo hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo xildhibanada ku tilmaamay kuwa ”calooshood u shaqeystayaal ah” oo aan ka fikirineynin dadka ay matalaan